Ubhaliso luvuliwe ngeVeki yeWebhu yeWebhu ye-MundoGEO - Geofumadas
NgoSeptemba, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha
MundoGEO ikhuthaza iveki ekhethekileyo yemininimitha ye-intanethi esuka kwi-9 ukuya kwi-13 ngoSeptemba. Inani lababhalisi sele lidlulile kwi-2,5 lamawaka
I-MundoGEO iya kuqhuba i "Week of MundoGEO Weekinars Week" esuka kwi-9 ukuya kwi-13 ngoSeptemba. Ukubhaliswa kuvulekile kwaye kufuneka kwenziwe kwinqanaba le-seminar nganye.Ngemibono ye-7 lamawaka abhalise kwiziganeko ezihlanu, iWebinars Week ye-2013 iza kubonisa izihloko eziliqela kwi-geotechnologies kwaye iya kubanjwa kunye neenkampani kunye namaziko kwicandelo. Jonga i-ajenda engezantsi: • 9 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-17: 30 GMT: Hamba umkhondo: Ukubeka iliso ngeThala leSpeyinti
I-Astrium Geo IiNkonzo zinika inkonzo entsha yokubeka iliso ngokusebenzisa imifanekiso ephakamileyo kunye nezisombululo eziphakamileyo ezivumela ukuba kuqinisekiswe utshintsho olude olwenzeka kwindawo yakho yomdla, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi indawo, isisombululo okanye ukufunwa kwakhona.
• I-10 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-17: I-30 GMT: Ukusetyenziswa kwe-GIS yeselula kwi-Management Environmental Impacts
Kulo webinar, iLeica Geosystems iya kubonisa izicelo eziphambili ezikhoyo ngokusebenzisa i-GIS iifowuni zee-intanethi ngokuphonononga uphando ukuze zifumane iimpawu ezihambelana nempembelelo yemvelo ngendlela epheleleyo.
• I-11 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-17: 30 GMT: Izicelo ezinkulu zeDatha ye-Traffic Analysis
I-Maplink imema bonke abahlali be-geotechnology ukuba bathathe inxaxheba kwi-seminar ye-intanethi kwi-Big Data izicelo zokuhlalutya kwezithuthi. Nxaxheba!
• I-12 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-14: 00 GMT: Ukuqhubela phambili kwe-GvSIG
Kule webinar, i-GvSIG Association iya kubonisa iiprojekti eziphambili zokwenza i-raster kunye nohlalutyo lwe-vector olukhoyo kwi-desktop ye-GvSIG.
• 13 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-14: 00 GMT: IiNzuzo ze-EUMETCast System
I EUMETCast yinkqubo ephantsi ngeendleko yokudlulisela ulwazi satellite, ngexesha lenene, kulindeleke ukuba awabe imifanekiso satellite yemozulu Meoteosat Second Generation (MSG), kwakunye iimveliso kunye neenkonzo ze-Global Earth Ukwakhelwa Systems of kwiNkqubo System (GEOSS ).
Iisemina ziya kuhlala malunga neyure nganye kunye nemibhalo kufuneka yenziwe ngokwahlukileyo kwisiganeko ngasinye. "Webinars Le veki iya kuba lithuba elilodwa kubahlali ukufumana ulwazi ngemiba eyahlukeneyo enxulumene geotechnologies ngaphandle kokuba ashiye ikhaya okanye i-ofisi yakho," watsho Eduardo Freitas, umnxibelelanisi MundoGEO iisemina online. "Abalingani bethu balungiselela iintetho ezijoliswe kakhulu kwiindlela zokuphucula ubomi beengcali ze-geotechnology. Kufanelekile ukuthatha inxaxheba, "ugqiba.
Kuzo zonke i-webinars abathathi-nxaxheba baya kukwazi ukusebenzisana nababukeli ngokuthumela imibuzo yabo ngokusebenzisa ingxoxo. Ziya kuthunyelwa izatifikethi ngamnye digital kubo bonke abo online kwiintlanganiso yaye webinar yokugqibela (13 / 9) iya kuba draw ye Umatiloshe GPS Garmin phakathi babhalisiwe kule veki.
Ubhaliso ngoku luvulekile! Faka isiqhagamshelo sewebhu, ubhalise kwaye uhlale ulungelelanisa ishedyuli nganye yemininari ye-intanethi. Ngolwazi olungakumbi, tyelela:mundogeo.com/webinar.
MundoGEO Iintlanganiso ze-Intanethi
Uchungechunge lweemininari ze-intanethi (i-webinars) i-MundoGEO yenzelwe iinjongo zezemfundo nezokwazisa kwi-teknoloji, amatyala kunye nemigangatho kwi-geotechnology kwicandelo. Indlela yeemina-seminqanaba emgama ihambelaniswe neemfuno zomhlaba zomxholo wobugcisa kwisithuba esifutshane, ngaphandle kokuba nabani na oya kuhamba, abafundisi okanye abalamli, okanye abathathi-nxaxheba.
Ngaphandle kweemviwo ze-120 kwi-intanethi eziqhutywe kwi-2009, i-MundoGEO inomyinge we-1.500 ababhalisile kunye nabaxhamli be-750 kwisiganeko ngasinye. Zonke ii-webinars zirekhodwa kwaye iividiyo zifumaneka kwiiyure ezimbalwa emva kweemina, ukwenzela ukuba abathathi-nxaxheba bahlaziywe kunye nabo bangenako ukuxhuma. Ii-archives, kunye ne-ajenda yeemina-semina ezizayo, ziyafumaneka kwi: www.mundogeo.com/webinar.
Post edlulileyo«Edlulileyo Izikolo ze-AutoCAD ze-3D zama-Free-Revit - Microstation V8i 3D
Post Next Gcina ithempulethi ye-UTM kwi Geographies ekukhuthazeni iiGofumadasOkulandelayo "